Mpiara-miasa amin'ny finnair miaraka amin'i Juneyao Air amin'ny lalana Helsinki-Shanghai sy ny sisa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana China » Mpiara-miasa amin'ny finnair miaraka amin'i Juneyao Air amin'ny lalana Helsinki-Shanghai sy ny sisa
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana China • Vaovao farany Brezila • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny mpanjifa Finnair dia hahazo tombony amin'ny fifandraisana tsara kokoa amin'ny tambajotranà toerana 57 any Shina avy amin'ny hub Pudong any Juneyao, ary ny mpanjifa Juneyao dia hankafy ny fidirana tsara kokoa amin'ny tambajotran'i Finnair manana toeran-tany 65 eropeana amin'ny alàlan'ny hub Helsinki-ny.
Finnair sy Juneyao Air dia manao fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa.
Hiara-miasa ara-barotra ireo mpitatitra roa amin'ny sidina manelanelana an'i Helsinki sy Shanghai.
Finnair sy Juneyao Air dia miasa sidina 2 isan-kerinandro eo anelanelan'ny Helsinki sy Shanghai ary hampitombo ny refesina raha vantany vao avela ny tranganà aretina.
Finnair sy Juneyao Air monina any Shanghai dia hiditra amin'ny fiaraha-miasa iombonambe amin'ny 1 Jolay 2021, izay hiarahan'ny mpitatitra roa hiasa ara-barotra amin'ny sidina eo anelanelan'ny Helsinki sy Shanghai ary koa ireo teboka ankoatr'izay any Chine sy Eropa.
Finnair ary Juneyao Air dia nanomboka fiaraha-miasa codeshare tamin'ny Jolay 2019, rehefa Juneyao Air nandefa ny lalany Shanghai-Helsinki. Ny raharaham-barotra iraisana dia manamafy ny fiaraha-miasa, manome mpanjifa orinasa sy fialam-boly amin'ny safidy mora aleha kokoa, saran-dàlana manintona ary tombony mihatsara ho an'ny mpikambana flyer matetika. Ny mpanjifan'i Finnair sy Juneyao dia hahazo tombony amin'ny politikan'ny mpanjifa tsy miovaova ohatra, amin'ny alàlan'ny enta-mavesatra, ny fikarakaran'ireo mpanjifa ary ny fanamafisana ny mari-pankasitrahana flyer matetika manerana ireo zotram-piaramanidina roa.
Finnair sy Juneyao Air dia miasa sidina 2 isan-kerinandro eo anelanelan'ny Helsinki sy Shanghai ary manantena ny hitombo isa hatrany raha vantany vao mamela ny toe-javatra areti-mifindra. Tamin'ny taona 2019, Finnair sy Juneyao Air dia samy niasa sidina isan'andro teo anelanelan'ny Helsinki sy Shanghai.
"Finnair dia momba ny fanomezana fifandraisana tsara indrindra eo amin'i Eropa sy i Azia", ​​hoy i Topi Manner, Lehiben'ny Executive Executive ao Finnair. “Tena fiaraha-miasa mandresy fandresena ity, hahafahan'ny mpanjifa Finnair sy Juneyao mankafy ny fidirana amin'ny tambajotra iraisanay. Izy io koa dia porofon'ny fanoloran-tenan'ny finnair mafy an'i Shina ho tsena stratejika. Manantena izahay ny hiara-miasa akaiky amin'ireo namanay ao Juneyao, hanangana tetezana matanjaka kokoa eo anelanelan'ny Sina sy Eropa amin'ny alàlan'ny hubs any Shanghai sy Helsinki. ”
"Voninahitra ho anay ny manangana ara-dalàna an'ity fiaraha-miasa stratejika ity miaraka amin'i Finnair hanome ny mpanjifanay vokatra sy serivisy kalitao misimisy kokoa, hanome safidy malalaka ho an'ny sidina ary fiainana tsy misy tohana. Ny orinasa iraisana miaraka amin'i Finnair dia hamela ny Juneyao Air hanamafy ny tsenany any Eropa, izay paikady lehibe amin'ny fanitaranay manerantany satria mampitombo be ny fisian'ny Juneyao Air amin'ny tsenan'ny fiaramanidina ho lasa 'mpitatitra manana lanja ambony' ”, hoy izy. Zhao Hongliang, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Juneyao Air.
Juneyao Air dia nanomboka ny lalany avy any Shanghai ka hatrany Helsinki ny volana jolay 2019, ary nanomboka teo i Finnair sy Juneyao dia samy niasa tamin'ny serivisy Helsinki-Shanghai samy hafa sy ny sidina mampifandray voafantina avy any Helsinki mankany Eropa ary avy any Shanghai mankany amin'ny toerana hafa any Shina. Ny fifanarahana nifamaly ho an'ny mpikambana flyer matetika an'ny Finnair Plus sy Juneyao Air Club dia nampiharina tamin'ny volana Aogositra 2019 ihany koa, ahafahan'ny mpanjifa mahazo sy manavotra kilaometatra sy isa mandritra ny tambajotra iray an'ny mpiara-miasa.